I-Brucite iyindlela yamaminerali ye-magnesium hydroxide - ividiyo
Thenga i-brucite yemvelo esitolo sethu
I-Brucite iyindlela yamaminerali ye-magnesium hydroxide, ene-formula yamakhemikhali iMig (OH) 2. Kungumkhiqizo oguqukayo ojwayelekile we-periclase kwimabula, amaminerali we-hydrothermal vein aphansi okushisa amancane kuma-limetones amatshe angenamatshe nama-chlorite schists, futhi akhiwa ngesikhathi se-Sniniteization ye-dunites. I-Brucite ivame ukutholakala lapho ihlangana nenyoka, i-calcite, i-aragonite, i-dolomite, i-magnesite, i-hydromagnesite, ubuciko, i-talc ne-chrysotile.
Imukela isakhiwo se-CdI2-esifana ne-hydrogen-bond phakathi kwezendlalelo.
UBrucite waqala wachazwa ngonyaka we-1824 waqanjwa igama lokuthi umsunguli, umdidiyeli waseMelika, u-Archibald Bruce (1777-1818). Uhlobo lwe-fibrous lubizwa nge-nemalite. Kwenzeka ngemicu noma imishayo, imvamisa, kepha kwesinye isikhathi izinkomba ze-crystalline.
Indawo ephawuleka e-US yiMayini yeWood's Chrome, i-Cedar Hill Quarry, iLancaster County, ePennsylvania. I-Brucite ephuzi, emhlophe neluhlaza okwesibhakabhaka enomkhuba we-botryoidal yatholakala eQila Saifullah District of Province Baluchistan, Pakistan. Futhi ngemuva kokutholwa kamuva iBrucite nayo yenzeka eBela Ophiolite yaseWadh, esifundeni saseKhuzdar, eSifundazweni saseBaluchistan, ePakistan. Lesi simangaliso senziwe futhi sivela eSouth Africa, e-Italy, eRussia, eCanada nakwezinye izindawo kodwa okutholakale kakhulu yizibonelo zase-US, Russian nasePakistan.
Intsingiselo ye-Brucite, amandla, izinzuzo, ukwelapha kanye nezakhiwo zokulinganisa
I-Brucite izokusiza ngezindlela eziningi kufaka:
Kuyaziwa ukuba nezindawo ezinhle kakhulu zokuphilisa kufaka phakathi nokusiza ukulawula ukushisa komzimba.
Lezimbiwa kuthiwa zihlanganisa amandla angasiza umzimba ukubhekana ne-alkalinity eyeqile.
Kungasiza izinkinga zamathumbu futhi kusize ekunciphiseni imithambo ecijile.
Kuyaziwa nokusiza ukulimaza nokusiza izinkinga ngaphakathi kwezicubu zomzimba ngokuthuthukisa ukuqina nokuqina.
I-Brucite nayo idume ngokusekela ukuphulukiswa kwamathambo aphukile futhi yaziwa njengokunciphisa i-neuralgia nobuhlungu obuhlangene.
Ngesenzo saso ukuvula i-chakra yomqhele kuthiwa ukunciphisa ubuhlungu bekhanda ne-migraine. Sebenzisa i-chakra yomqhele ukukhulisa imimoya yakho, ukuthuthukisa ukucabanga kwakho futhi uthuthukise imizwa yakho.
IBrucite inokudlidliza okuwusizo okungakusiza ukwambule uma isimo obandakanyeke naso sikuthakazelisa kakhulu.
Kulabo abasebudlelwaneni bomuntu siqu lapho unomuzwa wokuthi akusekho okulungile kuwe nokuthi mhlawumbe ukuphela kuyeza, amandla aleli tshe angakusiza ukuthi uthathe isinqumo ngesinyathelo okufanele usithathe.
Sikwenzela ubucwebe bokuhlobisa njengendandatho, umgexo, amacici, isongo nomgexo.